मेरो पेटमा तिम्रो नासो छोडेर कहाँ भागी जान्छौ प्रदिप ? मेरो जीवन रहुन्जेल तिमिलाई खोजीरहनेछु – ताजा समाचार
देखेर चिनेको महिला दिदी बहिनिहरुलाई दु:ख पोखाएँ! तर अन्न्यायमा परेकोलाई कहाँ छ र न्याय? खै मैले त पाउँन सकिन। न्यायलय भनेको त मैले त उल्टै अन्याय पो सहनु पर्यो। फिदिमको तिम्रो दिदी भेनाको घरमा गएर सबै कुरो यथार्थ कुरो सुनाएँ! तर भाइ भागेर कोईला खानी गाको छ, पछि सुत्केरी खर्च दिन्छ भने पछी दिदी-भेना पनि सम्पर्क बिहिन भयो। त्यस बेला त म इलाममा मेरो बडिबा-बडिमाको संरक्षणमा रहँदै आएको थिएँ। त्यस अघि नै २०७२ फाल्गुन महिनामा आफन्तहरुले बाबू
बिनाको बच्चा जन्माउँन हुँदैन भनेर गाउँ निकाला गरिसकेको थियो मलाई! अनि केही महिना पछि इलाम अस्पतालमा नानी जन्मियो। त्यस पछि एक महिनाको नानी लिएर गाउँ गएँ। केही दिन नहुँदै घर छोड्नु बध्य बनायो मलाई। फेरि इलाम बडाको घरमा आएँ। अनि बडिमाले काठमाडौमा एउटा संस्था चिन्नु भएको रहेछ। त्यहीं कुरो मिलाएर पुराउँनु भयो। म त खुशी छु खानु लाउँनु दिनु भएको छ। केही सीप सिकाउँनु भएको छ।